Successga nke ọma akụkọ LLC "Razdolye" (Mpaghara Moscow) - "Usoro nduku"
Companylọ ọrụ Miratorg ewepụtala akwụkwọ nri na nduku na mpaghara Tula
Companylọ ọrụ "Razdolye" LLC hiwere na 2008, mana natara ọhụụ ọhụrụ na mmepe na 2015
afọ na mbata nke otu ndị na-eto eto na ndị ọrụ na-aga n'ihu.
A tụlere ahịa ugbo wee mepụta atụmatụ mmepe kachasị mma nke ụlọ ọrụ maka mpaghara a, na-echebara ala na ọnọdụ ihu igwe echiche. Ruo ugbu a, a na-enye ihe kacha mkpa n'akụkụ atọ: ịkọ nduku; ị nweta nri (hay, ahịhịa) na ọka na-eto. Enterlọ ọrụ a nwere mpaghara atọ dị iche iche na mpaghara Moscow - Istra na Dmitrovskoye, nke na-emepụta nri, na Klinskoye, bụ ọkachamara na-eto eto nduku. Nke ikpeazụ a dịdebere ọdụ nchekwa nke Zavidovo. N'ihi ya aha ika anyị - "Zavidovsky nduku".
Companylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ zuru ezu nke ọrụ mmemme maka ịkọ ihe, nhazi, nchekwa na ọrịre nke ngwaahịa ugbo, nke na-enye anyị ohere ịchịkwa ogo na usoro mmepụta niile - site n'ọhịa ruo ndị ahịa ikpeazụ. Ugbu a ugbo a nwere ihe karịrị hekta puku 10,5, mmụba nke nnukwu mmepụta na 2020 ruru ihe karịrị 70%. Companylọ ọrụ nwere ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị www.ecorazdolie.com na Instagram akaụntụ @eco_razdolie
Companylọ ọrụ ahụ were mmadụ iri anọ na ise, na mgbakwunye, ihe dị ka mmadụ iri abụọ na-arụ ọrụ n'oge oge n'okpuru nkwekọrịta. Companylọ ọrụ a nọ ugbu a na mmepe nke uto na uto, ya mere na 45 ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ mụbara site na 20%.
Ugbu a, anyị arụpụtala teknụzụ nke nduku na-eto eto wee weta ebe a na-akụ ihe na hekta 250 n'afọ a, na afọ na-esote anyị na-ezube ịbawanye ya na hekta 350. Na mgbakwunye, site na 2021 anyị na-eme atụmatụ ịmebata beets na carrots n'ime mmepụta.
Varietiesdị dị iche iche n'oge oge na-eto eto nwere ihe dị iche iche achọrọ maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi, ọdịnaya nke nri na ala na nri ịnweta. Ya mere, ugbo obula n'emeputa ihe eji eme ugbo, dika iwu, na-eto ma ọ dịkarịa ala ụdị abụọ nke otu ihe ọkụkụ. Anyị na ọdịnala na-akọ ụdị nduku dị ka Gala na Red Scarlett n'ubi anyị. Na mgbakwunye, akụkụ nke mpaghara afọ a bụ ihe ọkụkụ nke Vega na Merlot poteto.
Ndị buuru ụzọ poteto, anyị nwere ike ịnwe mọstad dị ka nri na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọka wit.
A na-egbute poteto na ndị na-egbute nduku nke oge a Grimme SE 260. Ogo nke akụrụngwa a zutere atụmanya anyị niile, ọ na-ezute ihe niile achọrọ.
Inwe nchekwa dị mma bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi maka ọganiihu azụmaahịa na ịba uru. Ọnụahịa maka ire poteto na "oge dị elu", nke sitere na Disemba ruo Mee, nwere ike ịgafe 2-2,5 ugboro ọnụahịa n'oge owuwe ihe ubi.
Anyị nwere nnukwu ọrụ maka owuwu nke ụlọ ọrụ nchekwa ihe oriri ọhụrụ ise, ma ugbu a ụlọ ọrụ ahụ ewulitela ebe nchekwa ụdị hangar (frameless) maka puku puku tọn 7 nke nduku nwere ọwa ikuku. N'afọ sochirinụ, a ga-etinye nchekwa nchekwa ọzọ nke otu ụdị nwere ikike nke 3,5 puku tọn.
Tupu ịchekwa nduku maka nchekwa, a na-ehichapụ nduku nduku, kpoo, kpochapụ ya ma gwọọ ya megide ọrịa na pests. A na-ejikwa ọgwụ ikuku na ihe nchekwa eji eme ihe. Nke a bụ usoro dị mkpa ma bụrụkwa ntọala maka mbenata ọghọm nchekwa.
Na 2017, ụlọ ọrụ ahụ bidoro ibute poteto na ụlọ ahịa 13 Myasnov dị na Moscow na Nizhny Novgorod. N'oge a anyị na-enyekwa poteto anyị na netwọk VkusVill. Na mgbakwunye, mkparịta ụka na-aga n'ihu maka inwe mmekọrịta na netwọkụ "Victoria", "Azbuka Vkusa", "Globus Gourmet". Anyị na-ebukwa obere ahịa azụ ahịa site na mmepụta. Nduku niile a na-eto n'ubi anyị na-agbaso GOST.
Anyị ga-aga n'ihu na mmejuputa oru ngo maka owuwu nke ebe nchekwa ihe oriri iji weta mkpokọta nchekwa ha na 17,5 puku tọn. Anyị ga-azụlite akara aka anyị nke Zavidovskiy eco-poteto. N’ọdịnihu, anyị na-eme atụmatụ imeghe ụlọ ahịa maka ịhazi ngwaahịa inine. N'ihe banyere ịzụ ahịa nri, enwere ebumnuche - iburu ndị isi na mpaghara Moscow ma rute ahịa nke ihe ruru 4 tọn kwa afọ.
N'oge a, ọtụtụ ugbo nwere nsogbu na ndị ọrụ. Ọ metụtara ụlọ ọrụ anyị: enwere ndị ọkachamara ruru eru n'ọhịa nke agronomy na ndị ọkwọ ụgbọ ala nke klaasị niile, ọkachasị ndị nwere ahụmịhe na ngwa ndị si mba ofesi.
Tags: "Zavidovsky nduku""Mmezi"nduku na-etoMpaghara Moscow
Osisi ndị magburu onwe pedigree. Otu esi egbochi nduku nduku ma nweta owuwe ihe ubi bara ọgaranya
Ihe ọhụụ ọhụụ ọhụụ a raara nye nduku pụtara na mpaghara Tyumen
A na-ezube nnukwu ụlọ ahịa ihe oriri na mpaghara Moscow
Atụmatụ nke oge 2020. Enweghị ndị ọrụ